Farmaajo oo toogasho iyo sumeyn ka billaabay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
13 January 2022 Maxuu Farmaajo ula xiriiro mas’uulka ugu sareeya Libya?
Farmaajo oo toogasho iyo sumeyn ka billaabay Muqdisho
Fahad iyo Farmaajo, waxaa hore loogu eedeeyay in ay khaarijiyeen saraakiil iyo siyaasiyiin ka aragti duwanaa, hayeeshee, xilligaan waxa ay duullaan toos ah ku yihiin shaqsiyaadka ka hor taagan, in ay ku sii jiraan Madaxtooyada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Kooxda Farmaajo go’aansadeen hirgalinta qorshe ay muddo dheer ku fakarayeen, kaas oo ah in la khaarajiyo shaqsiyaad ka kala tirsan Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Golaha Midowga Musharixiinta iyo falanqeeyayaal mucaarad ah.
Qorshahaan waxaa iska kaashanaya saraakiil ka tirsan hay’adda Nabad-sugidda NISA, iyo xubno Sir-doon oo ka socda dalka Eritrea, waxaana la sheegay in dadka loo bar-tilmaameed-sanayo labo hab oo kala ah, toogasho iyo sumeyn.
Billowgii bishaan ayay Keydmedia Online, baahisay in ay caasimadda Soomaaliya soo gaareen Saraakiil ka tirsan Sirdoonka dowladda Eritrea, oo Afwerki u soo diray in ay Farmaajo, ka caawiyaan waddo kasta oo uu ku sii joogi karo Madaxtooyada.
Sida ay muujinayaan warbixinnada arrinkaan la xariira, dadka uu Farmaajo la rabo in laga takhaluso, waxaa ka mid ah, Wasiirka Amniga, Wasiirka Gaashaandhigga, Wasiir ku xigeynka Warfaafinta, Madaxweynayaashii hore, Hoggaamiyah Xisbiga Wadajir, Saraakiil Ciidan iyo shaqsiyaad kale oo mucaraad ah.
Todobaadkii hore, General Yuusuf Maxamed Siyaad [Indhacadde], ayaa ka badbaaday isku day dil, xilli uu ku suganaa Xerada Xalane dhanka xeebta, halkaas oo lagu ordo galabkii iyo subixii, waxaana labo xabad oo lala beegsay mid ka mid ah ay ku dhacday koofida u xirneyd, sida ay KON, u xaqiijiyeen xubno ka tirsan qoyskiisa.
Professor, Yaxye Caamir, oo ka mid ah aqoon-yahanna sida adag kaga soo horjeeda Farmaajo, ayaa maanta sheegay in muddo usbuuc ah ey dhakhaatiirtu xayireen dhaqdhaqaaqiisa, kadib markii jirkiisa laga helay sun uusan garaneyn xilliga ay gashay.
“In kasta oo cuntadii la iga joojiyay si looga dhaqo suntan, inkasta oo xaalad khatar ah aan soo maray sida ey ii sheegeen dhakhaatiirtu, Alla mahadii 48 Saac ee ugu dambeyasay waxaan dareemayaa Caafimaad, Xalayna waxaan Salaadda ku tukaday istaag”. Ayuu Prof Yaxye Caamir.
Isniintii, waxaa fashilmay isku day ay ku doonayeen in ay burburiyaan hay’adaha dowliga ah, hadda waxa ay wajahaan canaan caalami ah iyo mid gudaha ah intaba, waxaa xaddidan dhaqdhaqooda gudaha, hayeeshee, waxa ay isku dayayaan in ay iska daygooda ugu danbeeyay ku khaariyaan dad muhiim ah.
Inta badan gacan yarayaashii Fahad Yaasiin, ayaa dalka ka baxsaday, waxaase wali bixin Kullane Jiis oo ka mid ah saraakiisha Xubnaha Sirdoonka Eritrea la deggan agagaarka Xarunta NISA, ee Habar Khadiijo.
Bilihii October, November iyo December ee sanadkan, waxa ay xoguhu sheegayaan in ku dhawaad 100 dhallinyaro Al-Shabaab ah laga soo saaray Xero Sarandi, oo ah gob lagu dhaqan celisho shaqsiyaadka ka yimaada dhanka Al-Shabaab, waxaana dhallinyarada qeyb ka mid ah loo qeybshay aqoonsi ciidan iyo bastoolado. [MADAX-JABIS].
Fahad iyo Farmaajo, waxaa hore loogu eedeeyay in ay khaarijiyeen saraakiil iyo siyaasiyiin ka aragti duwanaa, hayeeshee, xilligaan waxa ay u tafaxeyteen in ay iska hor wareejiyan shaqsiyaadka ka hor taagan, in ay ku sii jiraan Madaxtooyada.
Xaaladda amni ee Puntland ayaa xilligan, laga muujinayaa rajo xumo, kadib markii ay guul dareysteen xalkii laga dhex waday Deni iyo reer diyaano.
Waa kuma gudoomiyaha cusub ee guddiga hirgalinta doorashada?
Warar 15 January 2022 21:50
Warar 15 January 2022 17:50
Hantidhowrka oo laalay qandaraas uu bixiyay Wasiirka Ganacsiga